इनरुवा नगरसभाका विषयमा प्रवासी भन्छन– पार्टीको प्रतिनिधी वन्ने कि जनताको ? – Yuvajagaran Nepal's Online Newspaper
इनरुवा नगरसभाका विषयमा प्रवासी भन्छन– पार्टीको प्रतिनिधी वन्ने कि जनताको ?
इनरुवा, १३ साउन २०७६ । इनरुवा नगरपालिकाले केन्द्रीय सरकारको परिपत्र र निर्देशन अनुसार असार १० भित्रमा नगरसभा गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई १ महिना पुगिसक्दा पनि पालना गर्न सकिरहेको छैन अर्थात अहिलेसम्म नगरसभा भएको छैन । यद्यपि विभिन्न अवरोधका बीच गत शुक्रबार सहमतिमा भनेर नगरप्रमुख राजन मेहताले प्रस्तावित बजेट पेश गरेको सुनिएको छ । र उक्त प्रस्तावित बजेटलाई भोलि असार १४ गते बस्ने नगरसभाले पास गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । अब चाहि जनप्रतिनिधिले के सोच्नु पर्दछ भने म जनताको प्रतिनिधि बन्ने कि पार्टी प्रतिनिधि ?
यसअर्थमा हाम्रो जनप्रतिनिधीहरु निकम्मा देखिएकै हुन । समयमा नै नगरसभा नहुनुको कारणवाट सिधा जनताले दुःख पाउने हुन । विभिन्न योजनाहरु सञ्चालन हुन नसक्नु, स्वास्थोपचार, आर्थीक सहयोग, सडक मर्मत ,दमकल सेवा, विजुली वत्ती, खानेपानी, विद्यालयको पूर्वाधार, छात्रवृती र खाजा, खेलकुद, स्वास्थ लगायतका अति महत्वपूर्ण र संवेदनशिल कार्यहरु समयमा नै हुन सकेनन भने त्यसको असर प्रत्यक्ष नगरवासीहरुलाई पर्न जान्छ । तर त्यसप्रति खै हाम्रा जनप्रतिनिधीहरु जिम्मेवार भएको । खै नगरसभा सम्पन्न गराउने काममा अपनत्व लिएको ।
वाहिर सुन्नमा आएको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जनप्रतिनिधीहरुको कारणले गर्दा सभा विथोलिएको छ । उदेक लाग्ने गर्छ नगरसभा र नगर कार्यपालिकामा समेत सुविधायुक्त वहुमत रहेको पार्टीका जनप्रतिनिधीहरुवाट नै नगरसभा हुँदैन भने यो भन्दा वढी अपेक्षा उनीहरुवाट के राख्न सकिन्छ । थप सुन्नमा अएको छ , वार्डमा करोडौँ रुपैयाको माग गर्दै वार्गेनिङ्ग हुँदै गरेकोले सभा समयमा नै हुन नसकेको हो । यदी साच्चै त्यसो नै भएको हो भने त्यो झनै निन्दनीय छ । वडाअध्यक्षहरुले योजना पेश गर्ने हो, कार्यक्रम पेश गर्ने हो र सो कार्यक्रम सभावाट पास गराउने हो, सोझै मैले यति पैसा पाउनुपर्छ भन्नुको आशय हामी जनताले के वुझ्ने । अर्को कुरा, जनप्रतिनिधी भनेको जनताको प्रतिनिधी हुन्छ , कुनै पार्टी विशेषका हुँदैन । दलिय संयन्त्र हुँदा मात्रै हो पार्टी प्र्रतिनिधी हुने । त्यसैले निर्वाचित भएपश्चात सवै जाना जनप्रतिनिधी हुन्छन पार्टी प्रतिनिधी हुँदैनन् । हो आफु उमेदवार भएको पार्टीको निर्देशन पनि सुन्नु पर्छ तर त्यो कतिको सान्दर्भिक र व्यवहारीक छ त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुनिन्छ नेकपाको पार्टी वैठकले नगरसभामा, कार्यपालिका वैठकमा जानुस भन्यो जनप्रतिनिधीहरु जान्छन् नजानु भन्यो जान पाउँदैनन् । अरे वाह, कहिले सम्म नगरपालिकालाई पार्टीले चलाउने रु कहिले सम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधीहरुलाई नगरपालिका संचालन गर्नवाट वञ्चित गर्ने रु कहिलेवाट जनप्रतिनिधीहरुले नगरपालिका चलाउन पाउने रु यदि पार्टीले नै स्थानिय तह चलाउने हो भने किन व्यक्ति उठाउनु पर्यो चुनावमा, राजनितीक दललाई नै भोट गर्ने व्यवस्था गरे भैहाल्यो नि सरकारले ।
इनरुवाको राजनितिकर्मीहरुको मानसिकता एकदमै दयालाग्दो छ । उनीहरु निर्वाचनमा भएको आफ्नो हारलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नै सक्दैनन् । साथै आफुलाई हराएको व्यक्तिप्रति समेत सधैँ भरी धारेहात लगाएर वस्छन । राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने क्षमता उनीहरुमा विल्कुलै हुँदैन । अहिलेको नगरपालिकाको विषयमा समेत त्यहि भएको राजनितीप्रति चासो राख्ने स्थानियहरु वताउँछन । मेयर मेहता सँग पराजित तत्कालीन एमालेका नेताले नै नगरपालिकाको विषयमा मेयरलाई दुःख दिनको लागी र आफ्नो सर्वोच्चता देखाउनको लागी पार्टीको ओहोदाको प्रयोग गर्दै आफ्ना पार्टीका जनप्रतिनिधीहरुको दुरुपयोग गर्ने गरको चर्चा व्यापक चल्ने गर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र बदला साँध्नकै लागी यदि पार्टी र सिंगो नगरपालिकालाई धरासायी बनाउने र जनतालाई दुःख दिने कार्यको नेतृत्व साच्चै त्याहाँबाट भएकै हो भने त्यसको जवाफ पुनः इनरुवाबासीहरुले दिने नै छन ।
स्थानिय पत्रिकाहरुका अनुसार गत केहि हप्ता अघि देखि इनरुवा नगरपालिकामा गत वर्ष भएको खर्चको विवरण अध्ययन गर्ने जनप्रतिनिधीहरुको टोलीले धमाधम खातापाता, भौचरहरु हेरीरहेको थियो । नगरपालिकावाट भएका खर्चहरु कतिको सान्दर्भिक थिए थिएनन सो को अध्ययन गर्न सो समिती सक्रिय थियो । तर कुनै त्रुटी नभेटिएपछी सोही अनुसारको प्रतिवेदन उक्त टोलीले वुझायो । त्यसपछी सवैको सहमतिमा यहि श्रावण १० गते सभा सम्पन्न गर्ने सहमति वन्यो । उता नेपाली काँग्रेसको नगर समितीको वैठकले नगरपालिकामा गठित समितीले जाँचबुझका क्रममा कुनै त्रुटी फेला नपारेको र आफ्नो नगर सभापती समेत रहेका नगरप्रमुख माथी लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै नेकपाको तर्फवाट निर्वाचित वडाअध्यक्षहरुको समेत आर्थीक कारोवारको छानविन गर्ने निर्णय सार्वजनिक भयो । त्यसलगत्तै, फेरी नेकपा पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरीयो र पुनः नगरसभालाई अनिर्णयको वन्दी वनाइयो ।
यस कार्यले नेकपाका प्रतिनिधीहरुप्रति झनै संशय पैदा गरेको छ । वडाले गरेको आर्थीक कारेवारको छानबिन गरीने माग राख्दा यसरी आत्तिएर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरीनुले उनीहरु पारदर्शी छैनन् कि भन्ने शंका उत्पन्न गरेको छ । अव त झनै अनिवार्य रुपमा जनतावाटै ति सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रनिधीहरुले गत आर्थीक वर्षमा गरेको खर्चको विवरण माग गरेर छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
मिष्टर एण्ड मिस थारु आइकन २०१९ सिजन २ का लागि फारम खुल्ला
इनरुवा नगरप्रमुखबाट ६९ करोडको बजेट पेश